Sida loo dejiyo miirayaasha vfxAlert | vfxAlert official blog
Sida loo dejiyo miirayaasha vfxAlert
Si aad u bilowdo fursadaha binary Ganacsi la signalada vfxAlert, dhigay goobaha filtarrada: hantida, isku geynta, awood, iyo waqti uu dhacayo. Waxaa jira dhowr nooc oo miirayaal ah.
Haddii aad rabto inaad ku ganacsatid hal hanti ama laba wakhti go'an oo cayiman, tag "Settings", fur qaybta "Filters". Halkan waxaad ka dooran kartaa hantida lagama maarmaanka ah, labada lamaane, algorithm, heerka awoodda, iyo waqtiga uu dhacayo.
Haddii aad caadaysatay inaad ka ganacsatid dhammaan hantida iyo algorithms, laakiin aad rabto inaad si dhakhso leh uga saarto calaamadaha aanad xiiseyneynin xilligan, waxaad ku shaandheyn kartaa liiska kore. Liistada kore, waxaad ku dejin kartaa sifeynta degdegga ah nooca hantida (lammaanaha forex ama crypto lammaanayaasha), algorithm, iyo waqtiga uu dhacayo. Hadda waxaad arkaysaa oo keliya calaamadaha aad u baahan tahay.
Haddii aad rabto inaad aragto calaamadaha hal lacag oo keliya, tag “Settings” oo calaamadee labada lamaane ee aanad u baahnayn.
Kadib u gudub dashboardka. Xulo hantida iyo algorithm aad ku ganacsaneyso oo guji "Filters on". Hadda waxaad aragtaa oo keliya calaamadda labada lamaane ee EURUSD.
Haddii aadan waxba arkin, tani waxay ka dhigan tahay in xilligan aysan jirin wax calaamado muujinaya astaamaha lagu xushay suuqa. Sug calaamaddu inay soo muuqato. Sidan oo kale, waxaad ku dooran kartaa calaamadaha algorithm iyo xoog gaar ah. Haddii aad had iyo jeer ka ganacsato isla xaalado isku mid ah, hubi hantida, algorithm, awoodda, iyo dhicitaanka aad u baahan tahay.
Samaynta dejintu fiiro gaar ah uma laha oo keliya waqtiga dhicitaanka laakiin awoodda calaamadaha. Heerka yar ee awoodda ayaa laga yaabaa inuu tilmaamo in calaamaddu khaldan tahay. Sidoo kale, u fiirso khariidadaha kuleylka .
Haddii aad rabto inaad dib u dejiso goobahaaga, u gudub menu-ka kore oo guji "Filters off". Waxaad arki doontaa calaamadaha dhammaan noocyada. Si aad u dalbato miirayaasha, guji “Filters on”. Waxaad kaliya yeelan doontaa calaamado leh goobaha aad dooratay.
Xusuusnow, in calaamadaha ay muuqdaan kaliya marka xaalada suuqa ay wax ku darsato.